हाम्राे शरिरमा देखिने निलो दाग के बोक्सीले नै टोकेकाे हाेत ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
हाम्राे शरिरमा देखिने निलो दाग के बोक्सीले नै टोकेकाे हाेत ? भन्ने विषयमा धेरै विवादित छ हेराै एसकाे सन्दर्भ
कुन संस्कारबाट हामी हुर्केका छौं भनी बुझ्ने हो भने बोक्सी, भूतप्रेतबारे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । बाबुबाजे लगायतबाट हामीले धेरै कुरा ग्रहण गरेका हुन्छौं ।
उहाँहरुबाट हामीले वंशाणु गुण त लिएका हुन्छौ नै, साथसाथै उहाहरुको चिन्तन, विश्वास र सोचाई पनि नजानिदो ढंगले ग्रहण भएको हुन्छ । ती पुराना संस्कारहरु पहिलेभन्दा घटेपनि अस्तित्वमा अझै छन् ।
जापनमा बाढीबाट मृत्यु हुने १५६ पुग्यो
समाजबोक्सीले नै टोकेकाे दाग, शरिरमा देखिने निलो दाग